Keydmedia Gormaa baratay oo aad ogaatay in ey jirto? R'ayigaaga ku Qor Meshaan!
Asc wrw dhaman umada somaliyed salan baran iga gudoom hadalka ama fikirkeyga ka dhiibto halkan walalayaal dalk &xaalka; uu mrayo waxaa laga wareestaa qurbo joogta maxaa yelay wadanimada &dowlad; la,anta iyaga ayaa dareema suxufigan walkeyga ah waxu kor ku xusey in dadyowga baqiga ku ah somaliya ey dhibateysan yihin ama dhib lo geesta waxaa run ah somalida baqiga ku ah dalka in ey tagero u yihiin koxaha wax ma garatada ah e dalka ku hardama misna an ogeyn dhibta walkis so garaya una muqato dantisa &sandarero;
« First < 87 88 89